IGeofumadas | Iindwendwe: | Izixeko ezili-100 kumazwe ali-10-iGeofumadas
Ikhaya/Internet kunye neBlogs/IGeofumadas | Iindwendwe: | Izixeko ezili-100 kumazwe ali-10
Sele iinyanga ezine uGeofumadas efudukele kwisizinda esitsha, ekugqibeleni emva kovavanyo lwe-Google algorithms kunye neenethiwekhi zentlalo ndikwazile ukudlula i-1,300 yeendwendwe ngosuku, into ebendiyilindele njengo-Meyi wamanzi kuba yayingumndilili wabantu baseCartesia. Ndithatha esi sithuba ukufumana iinkcukacha-manani zamacandelo athetha iSpanish apho iGeofumadas ifikelele khona.
Ndisebenzise isalathisi se-Google Analytics, esichaza isixeko apho umncedisi wenkonzo ye-Intanethi efakwe khona.
Ngaphandle kwee-Google ukutyelela, ndibhekisela xa omnye umthombo ubalulekile.
Ingxelo ehambelana ne-Google, ngokubanzi ibhekisela kubasebenzisi abangena kwisayithi kwiintandokazi okanye kuba babhala ngokuthe ngqo geofumadas.com.
Iifomati zisekelwe ekutyelelweni kwiinyanga ezine zokugqibela.
Amazwe ali-10 apho olona tyelelo lukhulu luza kule ndawo amele malunga neepesenti ezingama-87, xa kuthelekiswa nezinye izixeko ezibaluleke kakhulu. Nangona kunjalo zikhona ezinye izixeko kwamanye amazwe ezinokutyelela ngakumbi kunezinye izixeko ezikulayini.
Ukusuka apha iidolophu eziphambili ezili-10 zimi ngokulandelelana kwazo: iMadrid, iBarcelona, ​​iValencia, iSeville, iLa Coruña, iBilbao, iMalaga, iZaragoza, iGranada neMurcia. Nangona inani lisondele kwizixeko ezili-128 ngokwe-Analytics. Ndizisondezile iiCanary Islands ukuba zingayishiyi kwimephu.
I 33% yezi kufika ngqo, 4% zifika nge amakhonkco ukusuka domain endala kunye 2% Cartesianos kwaye ukufika Twitter, isicwangciso Ndaqalisa yokuhlala entsha.
Ukutyelela ngokuqhelekileyo AutoCAD 2012 kunye nakwixesha la kutshanje iimpazamo zeTectonic zaseSpain, akusiyo ngaphantsi koxinzelelo olutshanje kwaye kwaye okwethutyana inyikima yehlabathi inokwenza imfashini.
Kwimeko yaseMexico, iyafana neSpeyin, inezixeko ezithe saa (134). EMexico City, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca, Toluca, Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa kunye neXalapa.
Apha i-25% iza ngqo, ngaphandle kweGoogle, i-4% evela kwi-Bing, into engenzeki ngeSpain.
Igama eliphambili elifikile kakhulu nina egeomates nangona ingxaki I-UTM idibanisa kwiGoogle Earth.
Umxholo we-geomatic unemfashini kakhulu ePeru, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokugqitha kwenani labakhenkethi baseArgentina ebelikade likhulu ngepesenti. ILima ibonakala njengendawo entle, nangona kuvela ezinye iidolophu ezingama-23, kubandakanya iLa Victoria, Arequipa, Cuzco, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura neJuliaca.
Igama eliye lavela kakhulu kwiinjini zokukhangela nina egeomates, kuyaqaphela ukuba i-54% yeendwendwe zifika ngokuthe ngqo, kwaye i-6% yiTaringa inabasebenzisi abathandwayo.
Eli lizwe kuvela emizini 55, lo 10 zokuqala Bogota, Medellin kummandla ombhaxa ka Bogota, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibague, Soacha, Cucuta kunye Pereira.
I-26% ifikelela kwisiza ngokuthe ngqo, enye ngeGoogle kunye ne-2% ngeBing. Elona gama lisetyenzisiweyo AutoCAD 2012.
Apha kukho malunga 82 imizi zimelwe, i 10 lithe tso ukuba Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucuman, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, ukuncokola, ivelelwe kunye Bahia Blanca.
Iipesenti ezingama-24 ngokundwendwela ngokuthe ngqo kunye neepesenti ezi-3 ngeempendulo zeYahoo, ezisebenza kakhulu kuloo mmandla wecone esemazantsi. Elona gama lisetyenzisiweyo nina egeomates uze umlandele AutoCAD 2012 iindaba.
Iyafana imo abano, nangona izixeko 28 kuphela kuquka Santiago, Providencia, Concepcion, Valparaíso, vina Del Mar, Temuco, Antofagasta, Puerto Varas, La Serena, Talca.
I-31% iza ngqo kwisiza kunye ne-4% nge-Yahoo Answers.
Igama eliphambili elisetyenzisiweyo nina egeomates, ilandelwe Microstation.
Cities 27, 10 ncamisa lo myalelo: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay, Mérida, Puerto la Cruz, Maturin, Saint Kitts and Cumana.
I-30% yabasebenzisi iza ngqo kwaye inomdla ukuba i-6% isaza kufika ngokuhambisa kwakhona i-domain endala. Elona gama lisetyenzisiweyo nina egeomates, ilandelwe AutoCAD 2012 iindaba.
E-Ecuador akukho zixeko zase 8: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja, Ambato, Manta nasePortoviejo.
Elinye i-31% ngokutyelela ngokuthe ngqo kunye no-3% usebenzisa i-Bing.
Igama elingundoqo elisetyenziswayo, AutoCAD 2012.
Eli lityala elikhethekileyo, akufuneki libonakale kweli nqanaba leenkcukacha-manani kodwa linento eyodwa yokuba ndilapha. Ke ngoko, naluphi na uphando olunomxholo we-CAD / GIS ovela kwinjini yokukhangela yasekhaya luya kundisa eGeofumadas, ngaphandle koogxa bakho abachongiweyo kwimixholo.
I-Tegucigalpa kunye ne-San Pedro Sula aziveli, ziqhelekile kumazwe apho ababoneleli beenkonzo zonxibelelwano bengafakwanga imephu ngokuchanekileyo. Kodwa ngenxa yokuba imithombo yonxibelelwano ephambili isekwe kwizixeko ezikhulu kwaye nokuba abantu abavela kwiidolophu ezincinci banxibelelana ngemodem, abayi kuvela.
Nguye kuphela ilizwe elitshintshile ukusuka kwi-top10 emithathu kwiminyaka edlulileyo, eyayihlala i-United States ngaphambili. I-72% emangazayo iza ngokuthe ngqo kwaye inomdla we-7% uvela kuYahoo kunye nemifanekiso kaGoogle yokukhangela apho iposti ye udweba kuphela imifanekiso Ubeke umona ngegama elingundoqo elingcolileyo.
Igama eliphambili elisetyenziswa kakhulu nina egeomates.
Olu luntu olusebenzayo kakhulu, kodwa luyafana kwimeko yangaphambili. ILa Paz, iSanta Cruz kunye neCochabamba zigqamile.
I-17% ifika ngokuthe ngqo kwaye i-1% itsala umdla nge-Twitter. Elona gama lisetyenzisiweyo ngu UTM iziphumo.
Kuluhlu lwemihlaba elandelayo ye-5 ifakiwe:
Guatemala, inkunzi yayo ibonakala phezulu kwiidolophu ze10 apho ndifumana ukutyelela kakhulu.
El Salvador naseCosta Rica, rhoqo e-Central America.
EUnited States, apho amazwe aseTexas, eCalifornia, eNew York naseFlorida aphuma khona.
Yaye neRiphabhliki yaseDominican apho uluntu lwentlalo Liyasebenza.
Kuyaziwa ukuba icandelo elithetha iSpanish liphumelele kwindawo enomdla kwi-Intanethi. Kwimiba ye-geospatial, indawo yokufunda enxulunyaniswa namaqonga obunini kunye namaqonga ezixhobo mihla le ayenza ukuba ibe licandelo elinokubakho kushishino. Nangona koku, amazwe amaninzi kusafuneka agxininise ekukhuthazeni imigangatho yokulwa ubuqhetseba, inkuthazo kunye nokuvunywa kobungcali, ukuze intengiso izinze xa ujongene notyalo-mali kwindawo yeTekhnoloji yoLwazi.
Ndiyathemba ukuba uzifumene kwiimanani, ukuba awubonakali unelungelo.
Ndiyayibulela ingcaciso yakho ngeLa Victoria, kwaye ndiyavuma ukuba ukuzisa umba we-geomatics "kwifashoni ezinzileyo" ngokuqinisekileyo unomsebenzi omninzi wokuqala.
Ukususela mzuzu ndivula umjelo incoko ngenxa imizuzu ukuba mna ezikhoyo, ndibone ngobuzwe amaninzi nje kuphela ndwendwela le sayithi kodwa ntetho, cela, kwaye kuqondana kuzo aqhele ukuzifaka self-lokufundiswa sifundo okanye ukuthatha umsebenzi kwikholeji efuna ukuba basebenzise le nto gespacial.
Sawubona, Don G!, Lam amazwi okuqala kukuvuyisana ngokuba uphumelele umgomo wakho wokutyelela okuqhelekileyo. Oku kuthetha ukuba umgudu wakho uyavuzwa.
Kwelinye icala, ndifuna ukuqaqambisa into yokuba uluvo lwakho lokuba 'umba wegeomatic usefashini' apha ePeru sisiphumo somzamo omde nozinzileyo othe kangangeminyaka watyalwa cwaka kodwa ngokuzingisileyo ngoonjingalwazi abahlukeneyo baseyunivesithi, evule indlela ekusafuneka ihanjisiwe kwaye kuqikelelwa yona (ekugqibeleni!) Ukuba iPeru yam endiyithandayo iya kuyeka ukuba ngumntu nje kulo mbandela. Ndiyingqina elikhethekileyo kulo mzamo, okokuqala xa umcebisi wam we-thesis, Eng. Amadoda avela e-Univ.URicardo Palma apha eLima, wanyanzelisa ukubaluleka kwesihloko ukuba sikhethe kwaye xa ndinokwamkelwa njengomfundi okhululekileyo e-UNI (imbeko enkulu) kwiiklasi zeSatellite zeGeodey ezinikezwe nguIng. URalfo Herrera, omnye woovulindlela kulo mbandela kunye noIng Salazar osandula ukusweleka.
Okokugqibela, ukuqaphela ukuba 'iLa Victoria' ayilogama lesixeko sasePeru, kodwa ligama lesithili sedolophu yaseLima, isithili esaziwa kakhulu ngokuba sisiseko selinye lawona maqela ebhola ekhatywayo emveli kwilizwe lethu. : iAlianza Lima.
Ukuhambela phambili kwiLima Peru kwaye ulandele impumelelo.
Ndingowase-Oaxaca, eMexico ……… .. Ndibulisa kuzo zonke ii-geofumados